Fiampitàna An’Ireo Sisintany Siria-Tiorka: Loza Isan’ora · Global Voices teny Malagasy
Fiampitàna An'Ireo Sisintany Siria-Tiorka: Loza Isan'ora
MpanoratraAct For Ghouta
Voadika ny 30 Novambra 2018 6:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, čeština , Italiano, Español, русский, Français, 繁體中文, عربي
Mpifindramonina tao Hongria, tamin'ny Aogositra 2015. Sary: Gémes Sándor/SzomSzed, Creative Commons BY-SA 3.0 avy amin'ny Wikimedia
Taorian'ny faneren'ny fitondrana Assad an'ireo mponina tao Ghouta atsinanana mba hankany amin'ireo tanàna ao avaratra, nifidy ny hijanona eo amin'ny sisintany Siriana ny sasantsasany. Saingy ireo hafa kosa nifidy ny hiampita ny sisintany tiorka ary hanomboka fiainana iray lavitra ny ady, baomba ary fahafatesana. Tao anatin'izy ireo, ny sasantsasany nihevitra ny handeha lavitra kokoa mankany amin'ireo tanànan'ny Firaisambe Eoropeana.
Omar (tsy tena anarany) dia iray tamin'ireo nisafidy ny hialokaloka ao Tiorkia. Ny tsy filaminana, ny tsy fisiana fiarovana ary ny ady tsy tapaka ataon'ireo antoko mpanohitra, arahin'ny tsy fisiana asa sahaza na fahafahana mahazo fianarana ambony, no nanosika azy handray io karazana fanapahankevitra io. 22 taona izy, tonga ao Idlib, ao Avaratra-Atsimon'i Siria, anisany tao anatin'ireo vondron'olona nafindra an-kery avy ao Ghouta-Atsinanana.
Manodidina ny roa volana teo ho eo taorian'ny nahatongavany tao Idlib, nanapaka hevitra ny hitady làlana iray mba handehanana any Tiorkia i Omar sy ny namany. Nanatona mpijirika iray izay nanampy ny iray tamin'ireo namany tafaondrana any Tiorkia andro vitsivitsy talohan'izao izy. Nilazan'ilay mpijirika izy mba handeha ho any amin'ny distrika iray ao Siria, atao hoe Zarzour, mba hifampiraharaha mikasika an'ireo antsipirihany sy ny saran-dalana.
Rehefa azon'izy ireo ny antsipiriham-baovao, nihaona tamin'ilay mpijirika izy ilay namany tamina toerana iray voatondro ary nifanaraka ny telo tonta fa amin'ity alina ity izy ireo no hiampita ny sisintany. Notenenin'ilay mpijirika izy ireo mba hiandry ao anatina trano iray efa voaomana saingy tsy nipoitra mihitsy ity farany. Ora vitsivitsy taty aoriana, indreto olona dimy no tonga tao amin'ilay trano ary nilaza fa tratran'ny Zandary izy ireo ary nodidiany mba hiverina any Siria. Nampian'izy ireo fa anisany vondrona iray lehibe kokoa notsinjaraina ho roa izy ireo. Lasa ilay vondrona lehibe kokoa misy olona valo ary nanam-bintana fa tafita ny sisintany, tsy nisy nahita. Ho an'ity vondrona kelikely kokoaity, io no fikaràna fanimpolony tsy tontosa.
Araka ny fitantaràn'izy ireo, niantomboka tamin'ny fandehanana fiara ‘minivan’ iray ny dia, izay nitatitra azy ireo nankany Adduriyah, faritra iray mifanila amin'ny sisintany, narahina mpitaridalana, olona izay tena mahalala tsara ny làlana sady mifandray amin'ny finday aminà mpanaramaso iray. Ilay mpanaramaso indray no manaraka akaiky ny fihetsik'ireo tafika Tiorka. Efa nilazàna ny vondrona fa simba ny làlana ka tsy maintsy mitsambikina amin'ny rindrina ary miampita an'ireo rano miandrona. Nosembanin'ireo tafika Tiorka ny dia. Mpikambana telo tao anatin'ny vondrona no nanapaka hevitra fa tsy hanandrana intsony ary nijanona ao Siria.
Nipoitra ilay mpijirika nony ampitso maraina. Nitaky 450 dolara tamin'i Omar sy ny namany izy, vola izay efa nolazaina an'i Omar. Nasain'ilay mpijirika navelan'izy ireo avokoa ny zavatra rehetra teny aminy, anisan'izany ireo entany, satria ho sarotra ny dia. Nandà i Omar tamin'ny voalohany, saingy nanaiky nony farany rehefa nanazava ireo olona hafa fa mandritra ny fandalovana ny sisintany dia ho enta-mavesatra ho azy ireo entana ireo.
Nahitàna tovolahy efatra sy vehivavy roa ilay vondrona niainga. Nananika ny lohasaha izy ireo mandra-pahatonga teo amin'ny rindrin'ny sisintany. Rehefa avy nitsambikina, niteny tamin'izy ireo ilay mpitaridalana mba hihazakazaka tsy an-kijanona. Tsy maintsy nosintonin-dry zareo ireo vehivavy, izay vetivety dia lasa tena sarotra ho azy ireo ilay ezaka. Rakotra fotaka malama ilay làlana mikintaontaona, izay vao mainka mafy taminy tokoa satria nilentika tao anaty tany mando ny tongotra. Feno tsilo ihany koa izy io ary rano maloto mikoriana. Raha teo am-piaingàna hiampita ny sisintany indrindra ireo vehivavy ireo, tsy nahazaka intsony ireo vehivavy roa fa nitomany.
Nahataitra an'ireo tafika Tiorka ny dradradradran'izy ireo ka nahatonga azy ireo tonga teo an-toerana sady nanao tifi-danitra. Nadikan'ilay mpitaridalana izay nolazan'ilay Manamboninahitra Tiorka. Nentin'ireo manamboninahitra tany amin'ny tobin'ny miaramila misy tilikambo fiambenana ry zareo, misy jirobe tena mazava sy toerana malalaka fiantsonan'ireo angidimby. Nipetraka teo ambony ‘tapis’ izy ireo, niaraka tamina vondrona iray efa tratra teo aloha.
Miaramila iray no naka sary tsirairay azy ireo tamina finday. Nalaina avokoa ny anaran'izy ireo ary notazonina tao izy ireo hatramin'ny telo ora maraina. Isanandro isanandro, nifanampy isa tamin'ireo vondrona Siriana hafa izay tratran'ireo tafika Tiorka izy ireo – lehilahy sy vehivavy, tanora sy antitra.
Tamin'ny 3 ora maraina, tao anatina hatsikan-dririnina, naondrana tao anaty fiarabe fitaterana ilay vondrona mba ho entina miverina any amin'ny toerana fiampitàna ofisialy an'ny tiorka-siriana, famerenana mafaitra tamin'ny fotoana izay nampiakarana azy ireo tao anaty fiarabe sy nitondran'ny tafika Ghouta tatsinanana azy ireo an-jkery ho any Idlib.
Teo amin'ilay toerana fiampitàna, notaterina taminà fiarakely izy ireo mandra-pahatonga tany amin'ny tranon'ilay mpijirika, feno Siriana miandry handositra ny firenena. Faritra kely fotsiny hahafahana matory no ao. Tsy nahafahan'i Omar sy ny namany naka aina tsara ny tomanin'ireo ankizikely miaraka amin'ny hiakiak'ireo lehilahy sy vehivavy.
Ny ampitso maraina, niteny tamin'izy ireo ilay mpijirika fa tokony hiampita mandritra ny andro mazava. Isaky ny miha-manakaiky ny faritry ny sisintany, hitan'izy ireo ireo tafika Tiorka miparitaka manaraka ny sisintany. Tena nandà ankitsirano ny hanadrana hiampita izy ireo ka nanaiky ilay mpijirika hanemotra ny dia ho amin'ny alina.
Tamin'ny 8 ora alina, nentin'ilay mpijirika teo amin'ilay toerana teo aloha tao amin'ny sisintany izy ireo. Niandry tao anaty saha-nà oliva izy ireo, 200 metatra miala ny sisintany, izay nisy ihany koa an'ireo vondron'olona marobe niandry ny fiampitàna. Nandeha nitsirika ny toerana ny mpitaridalana ary nitatitra fa tsy maintsy miandry aloha – hatramin'ny 5 ora maraina. Nanomboka nitranga ireo olana teo amin'ny vondrona ary nanomboka nimenomenona tamin'ilay mpitaridalana ireo olona, nitaky ny mba hitondrany azy ireo hiverina. Niantso ny mpijirika ilay mpitaridalana ary niteny fa tsy mbola malalaka ny làlana, mbola tena ao daholo ireo tafika Tiorka ary hitifi-danitra izy ireo. Niandry adiny iray indray izy ireo, avy eo nody tany an-tranon'ilay mpijirika.
Kivy tanteraka i Omar sy ireo mpiadaria taminy. Reraka izy ireo, zara raha natory tao anatin'ny telo alina. Saingy tapa-kevitra ny hiampita ny sisintany ry zareo ary nandray fanapahankevitra hitady mpijirika iray hafa. Naverina tamin'izy ireo ny volany ary nandeha nankany Silkin, 30 kilometatra miala an'i Zarzour, izay niandrasan'izy ireo ilay mpijirika vaovao.
Fotoana vitsivitsy taty aoriana, tovolahy iray vao 18 taona eo no indro tonga ary nitonona ho mpijirika vaovao. Nentiny tany aminy izy ireo ary nazavainy tamin'izy ireo ny drafitra fanondranana. Nampiany fa ora iray monja ny fiampitàna ary tsy mihoatra ny 200 metatra ny faritra misy ny loza. Raha afaka mihoatra an'io dingana io izy ireo dia ho tafita soa an'i Tiorkia. Maha te-ho tia ny fianakavian'ilay mpijirika, nivavaka ho azy ireo mihitsy aza ilay reniny. 400 dolara no sarany nalain'ilay mpijirika tamin'izy ireo tsirairay ary, ary toy ilay mpijirika teo taloha, nilaza tamin'izy ireo izy fa tsy ho afaka ny hitondra ny fananany izy ireo.
Andro voalohany ho an'ny Ramadany masina io. Nisasa izy ireo ary nanomboka ny dian'izy ireo talohan'ny nilentehan'ny masoandro. Tonga ny mpitaridalana ary nanazava ny làlana hizorana. Olona dimy izy ireo, nizara ho andiany roa. Mila miampita ny reniranon'i Orontes aloha izy ireo, amin'ny alalan'ny lakana kely iray vita tamina tavoahangy plastika natambatambatra sy nohidiana tanaty harona lamba. Niandry an'ireo antso vavaka Maghreb ry zareo, satria variana hanapaka ny fifadiankaniny sy hihinana ny sakafo Iftar ireo miaramila, araka ny toromarik'ilay mpanara-maso tamin'ny mpitaridalana.
Tery amin'ny morona ery ampita, misy saham-barimbazaha. Nentin'ny mpitaridalana izy ireo, nihanika ny tany mamotaka sy ireo tsilo nandritra ny antsakadiny, mandrapahazon'izy ireo ny làlana vita tara. Avy eo nanao hazakazaka madinika 50 metatra teo ho eo izy ireo manelanelana ny làlana tara sy ny tendrombohitra. Nanohy nihazakazaka izy ireo raha toa nanavatsava niakatra ny tendrombohitra kosa ilay làlana. Antsasakadiny taty aoriana, nijanona ilay mpitaridalana ary nilaza tamin'izy ireo fa efa nihoaran'izy ireo ny faritra mampididoza. Nahazo aina izy ireo ary nihazo ny vohitra Tiorka iray. niafina tao anaty trano iray voaaro izy ireo izay niandrasan'izy ireo fiara iray hitondra azy ireo ny ampitso maraina.
Nidio izy ireo ary natory tao amin'ilay trano fialofana azo antoka. Ny ampitso maraina, tonga ny lehilahy Tiorka iray ary nanontany ny toerana alehan'izy ireo – namaly izy ireo hoe Istanbul. 200 dolara no nalainy tamin'izy ireo. Niakatra tao anaty fiarany ny olona dimy. Enina amby roapolo ora taty aoriana, tonga tany amin'ny toerana farany nofidiany izy ireo.
Fikasàn'i Omar ankehitriny ny ho any Eoropa. Mbola ho sahy hanao vy very ny ainy ihany ve izy hitady fiainana tsaratsara kokoa noho ny tany Siria?